Alaab U Fiican Tinta Jajabaysa Ee Aan Bixin - Daryeel Magazine
Alaab U Fiican Tinta Jajabaysa Ee Aan Bixin
1. Saliid Saytuun:
Saliida saytuunka waxay aad ugu fiican tahay tinta jajabaysa oo way xoojisaa. Waxaa ka buuxa waxyaabaha dufanka laga sameeyo ee loo yaqaano “Fatty Acids” , antioxidants oo ah waxyaabo jirka ka difaaca sunta iyo weliba Fiitamiin E. Tinta way qoysaa waxayna u yeeshaa dhalaal.
Marso madaxa saliid saytuun qandac ah ama diirran si fiican ugu duug, kadibna madaxa ku xiro shukumaan, ku haay ugu yaraan 30 daqiiqo. Ugu dambeyntii, iskaga mayr shaambo. Dawadaan isticmaal ugu yaraan 1 mar toddobaadkii.
Avocado-du waxay qani ku tahay fiitamiino, dufan borotiin iyo “fatty acids” iyo saliid dabiici ah. Waxay daawaysa burburka timaha, waxay tinta siisaa qoyaan iyo jileec. Avocado-du waxay dux u yeesha unugyada tinta waxay caawisaa koritaanka timaha.
Waxaad isku shiidataa 1 xabbo oo avocado 1 xabbo oo ukunta qeybteeda jaallaha ah iyo caanaha qumbaha. Madaxa iyo timaha marso si tartiib ah ugu masaajee, udaa mudo 1 saac, kadibna kaga mayr biyo diirran iyo shaambo.
Ukuntu waxay timaha siisaa nafaqo iyo dhalaal. Ukunta qeybta jaallaha ah waxaa ku jira borotiin, macdano iyo “fatty acids” oo timuhu ay ka helayaa nafaqo iyo dhalaal dabiici ah.
Ku daliig madaxa iyo timaha xabad ukun ah oo aad qastay . Bac ku xiro madaxa oo u daa mudo 20 daqiiqo ah kadibna iskaga mayr biyo qabow iyo shaambo.
Taas beddelkeeda, waxaad isku darsan kartaa 2 xabbo oo ukun ah koob barkiis yogurt ah 1 ama 2 qaado oo saliida almond oil ah, si fiican iskugu qas. Marso madaxa iyo timaha isku-darkaan. Shukumaan madaxa ku xiro, 30 daqiiqo kadib iska dhaq biyo qabow iyo shaambo.
Waxay u fiican tahay hagaajinta timaha burburay. Dacarta waxaa ka buuxo waxyaabaha borotiinka laga sameeyo ee loo yaqaanno “Amino Acids” iyo fiitamiinada A, C iyo E oo wanaagsan timaha.
Marso timaha casiirka dacarta. Ku hay 10 illaa 15 daqiiqo kadibna iskaga mayr biyo diirran.
5. Saliida qumbaha
Saliidaan waxaa ku buuxo nafaqooyin kala duwan oo aad ugu fiican timaha. Waxay ka hortagaa jajabka tinta waxay kobcisaa caafimaadka timaha.
Madaxa marso oo ku daliig saliid qumbe diirran habeen kasta ama ugu yaraan 3 jeer toddobaadkii. Ku seexo habeenkii subaxa ku xigana iska mayr shaambo khafiif ah.
Taas beddelkeeda waxaad isku darsan kartaa saliid qumbe diirran iyo malab. Isku shiid kadibna marso timaha. Sug 20 illaa 30 daqiiqo kadibna iskaga dhaq biyo qandac ah. Sidaan samee 1 ama 2 mar toddobaadkii.
Wuxuu nafaqo siiyaa timaha burburay. Malabku waxaa uu timaha ka dhigaa kuwo jilicsan oo caafimaad qaba.
Waxaad isku darsataa malab iyo biyo. Marso timaha 30 daqiiqo kadibna iska mayr. Dawadan isticmaal 2 goor toddobaadkii si aad u hesho natiijo fiican.
Waxyaabahaan kor xusan hal mar mawada isticmaalaysid, mid ka mid ah ayaad isticmaali kartaa. Xusuusnow burburka timaha ma ahan wax lagu daaweyn karo hal maalin ama todobaad, waxay u baahan tahay waqti iyo samir si aad u hesho natiijo ku raalli gelisa.
Iska ilaali stress-ka wuxuu burburiyaa timaha.
Ku dedaal cunista cunto isku-dheelitiran iyo cabbista biyo badan maalin kasta.
Samee jimicsi joogto ah wuxuu kor u qaadayaa caafimaadkaaga guud iyo kan timaha.
Markaad dhaqanayso tinta ha u isticmaalin xoog, si tartiib ah u dhaqo, hana shanlayn tinta oo qoyan.
Ku Dedaal shaambooyinka dabiiciga ah.
Shukumaan si aad ah ha ugu qallajin timahaaga.
Ha dabin timahaaga.
Seexo ugu yaraan 6 illaa7 saacadood oo hurdo ah habeen kasta.
Siyaabaha Dabiiciga Ah Ee La Iskaga Difaaco Agoolka